Gniap – Page4– Personal Blog
သပိတ်စစ်ကြောင်း မနက် ၅ နာရီခွဲကတည်းက နိုးနေတာ။ အိပ်မပျော်တော့တာနဲ့ DICA pdf တွေ လိုက်ဖတ်နေမိတယ်။ ABBYY OCR ကို သုံးပီး အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ဇယားတချို့ကို excel format ပြောင်းထားလိုက်တယ်။ အင်တာနက်လဲ အပိတ်ခံထားရတော့ Offline ဟိုကြည့် ဒီကြည့်လုပ်ရင်း ၇ နာရီမှာ သူငယ်ချင်းတွေဆီက ဖုန်းဆက်။ ၇ နာရီခွဲ – လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဆုံ။ Taxi ငှားပီး
February 21, 2021	4:38 pm
မနေ့ကထက် ဒီနေ့ ပိုဆိုးလာတယ်။ မန္တလေး ကမ်းနားလမ်းဘက်မှာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ၊ကျည်အစစ်နဲ့ ပစ်တာကြောင့် လူ(၂) ဦး သေဆုံးတယ်လို့ Media Page တွေကနေ ဖတ်ရတယ်။ ယုတ်မာမှုတွေကို ဘယ်လက်နက်နဲ့ တားဆီးကြမလဲ။ ကျနော်တို့တတွေရော ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တုန့်ပြန်ကြမလဲ။ အခုချိန် မဟတ္တမ ဂန္ဒီကိုပဲ ကိုးကွယ်ရမလား။ ချေဂွေဗားရားကိုပဲ ခေါင်းဆောင်တင်ရမလား။ ဒေတာ ဒီနေ့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံး Data Leak လို့ ပြောနိုင်တဲ့
February 20, 2021	4:11 pm
၂၀၂၁၊ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့ ဗမာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတယ်။ အဲဒီနေ့ရက်ကတည်းက မနက်ဖြန် ဆိုတာ မရှိတော့တာပဲ။ နေ့တိုင်း နေ့တိုင်းက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊သတင်းမှားတွေ၊ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုတွေ၊မလုံခြုံမှုတွေ၊အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေ ပြည့်နှက်နေတာ။တနေ့ တနေ့ ကိုယ် ဘာတွေ လုပ်နေမိမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ည(၈) နာရီ သံပုံးတီးနေရတဲ့ တစ်ချိန်ပဲ စိတ်ထွက်ပေါက် ရတယ်။ရေရှည် ဒီအတိုင်းသွားနေရင် အနုစားစိတ်ရောဂါ ရမယ် ထင်တယ်။ ဂန္ဒီပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ “စစ်လက်နက်တွေက ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲ သိမ်းနိုင်မယ်။ကျနော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကိုတော့
February 19, 2021	5:00 pm
Midnight Thought 4
မကြာခင် ၂၀၂၀ ကုန်ပီး ၂၀၂၁ ကို ရောက်တော့မယ်။ Year Reflection ရေးစရာ ရှိပါ့မလားတွေးရင် ဒီစာကို ရေးဖြစ်တာ ။ တနှစ်တာ သင်ယူဖြစ်ခဲ့တာတွေ – Google App Script Office Automation ပိုင်းအတွက် စရေးဖြစ်ခဲ့တာ ။ Dr.Thuta Chatbot မှာ ည(၈)နာရီတိုင်း ပို့ရတဲ့ message တွေအတွက် automate ဖြစ်အောင် လုပ်ရင် V1/V2
December 28, 2020	10:25 pm
၁။ https://git-scm.com/downloads Link ကို သွားပါ။ အောက်ပါ ပုံအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ၂ ။ Download 2.29.2 for Windows ဆိုသည့် စာသားကို နှိပ်၍ exe file ကို download ရယူပါ။ အောက်ပါ ပုံအတိုင်း ပြပါက Download ရယူနေပီ ဖြစ်သည်။ ၃။ Download ပီးသည့်နောက် ရရှိလာသည့် Exe file ကို click နှိပ်၍ ဖွင့်ပါက အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရမည်။ Next ကို နှိပ်ပါ။ ၄။ ထို့နောက် အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရသည့် ပုံတွင် default အတိုင်း ဘာမှ မလုပ်ပဲ Next ကို ဆက်နှိပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် မိမိ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်လိုပါကလဲ လိုအပ်သည့် checkbox များကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ၅။ ထို့နောက် ထပ်မံတွေ့ရသည့် ပုံတွင် dropdown option ကို နှိပ်၍ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Code Editor Software (ဥပမာ – Notepad++ , Sublime Text , Atom စသဖြင့်) ကို Git default editor အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည် ။ ယခု ကျွန်တော့်အနေဖြင့် Visual Studio Code အသုံးပြုသူ ဖြစ်သောကြောင့် VSC ကို default အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
December 7, 2020	9:14 pm
Date Error in PowerBI
When I converted string text – Date values into date format – Date , it showed errors. When I find out the solution, basically default date value(in local) is English(United State) format – means MM/DD/YYYY.
December 3, 2020	7:36 am